“परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय,वार्ताका लागि,नेपाललाई भारतको निम्तो”के अब कलापानी लिपुलेख विवाद सुल्झाउन बार्ता होलार? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय,वार्ताका लागि,नेपाललाई भारतको निम्तो”के अब कलापानी लिपुलेख विवाद सुल्झाउन बार्ता होलार?
“काठमाडौं, १२ मंसिर । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन् ।
“उनले डिसेम्बरको दोस्रो साता भारतमा हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकका लागि निम्तो दिएको बताइएको छ । बैठकको मिति यकिन नभए पनि डिसेम्बरको दोस्रो साता बैठक गर्ने विषयमा दुवै पक्षको बिचमा कुराकानी भइरहेको छ । मन्त्री ज्ञवालीसंगको शिष्टाचार भेटमा भारतीय विदेश सचिवले बैठकका लागि निम्तो दिएको बताइएको हो ।
“अब केही दिनमा नै यकिन मिति तय हुने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । समग्र द्विपक्षीय विषयहरुमा बुँदागत छलफल गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्ने र अन्य द्विपक्षीय संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने म्यान्डेट सो आयोगलाई छ । सो आयोगको बैठक २३ वर्षपछि सन् २०१४ मा बसेको थियो ।
“जसले कालापानी र सुस्तालगायतका विवाद समाधानका लागि गृहकार्य गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ र २०१८ मा सो आयोगको बैठक बसेको थियो ।
“सो बैठक दुवै देशले पालैपालो गर्ने परम्परा छ । कोभिड–१९ र दुई देशको सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतको बिचमा रोकिएका द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरु सुचारु गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको छ ।
“नेपाल र भारतको बिचमा डेढ दर्जन द्विपक्षीय संयन्त्रहरु रहेका छन् । जसको नियमित बैठक हुन सकेको छैन ।
Previous “संसारलाई वीर गोर्खाली,भनेर चिनाउने गोरखा आउँन पाउँदा,खुसी छु : सचिव श्रृंगला।
Next “रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, बढाउन,कस्ता खानेकुरा खाने ?जानकारी ,का लागि, पूरा पढ्नुहोस।